Mpanamboatra sy mpamatsy teknolojia fanosotra China Lithium Bromide | SHUANGLIANG ECO-ENERGY
Famonoana chiller / heat pump
Air Condenser / Cool Cool Tower
Karazana mivantana mivantana
Paompy hafanana hafanana
Chiller / Heat Pump an'ny Centrifugal Type-cooled
Fantsom-bolo mihady lavaka lalina
Coch Tube Heat Exchanger
Double Tube Sheet hafanana
Exchanger hafanana fiarovana
Inter Stage Cooler ho an'ny Compressor sy ny heater regeneration
Rafitra fanamafisam-peo maina ny fifehezana vy
Rafitra fanamafisam-peo mivantana mivantana (ACC)
Rafitra fanamainana maina an'ny tilikambo simenitra tsy mivantana
Fitsitsiana rano & fantsom-bolo fanalefahana rafitra fanamainana maina
Shuangliang dia manana fitaovam-piarovana maherin'ny 30.000 sy fiarovana ny tontolo iainana amin'ny asa marin-toerana eran'izao tontolo izao, zaraina amin'ny sehatra maro toy ny varotra, tranom-panjakana, indostria ary ny vokatra aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 manerantany.
Efa ho 40 taona ny traikefa amin'ny R&D sy ny famokarana fitaovana fitsitsiana angovo
Fitaovana fampangatsiahana lehibe / fantsom-panafanana hafanana R&D sy toby famokarana
Mpandray anjara amin'ny famolavolana ny chiller lithium bromide chiller / heat pump standard nasionaly
Fihenan'ny rivotra avo lenta sy COP mitarika indostrialy
Shuangliang dia manana mihoatra ny 30,000 fitaovana fitsitsiana angovo sy fiarovana ny tontolo iainana amin'ny asa marin-toerana eran'izao tontolo izao, aparitaka amin'ny sehatra maro toy ny varotra, tranom-panjakana, indostria ary ireo vokatra dia aondrana mihoatra ny 100 firenena sy faritra erak'izao tontolo izao.
Teknolojia mitarika no nampiasaina hiantohana ny
fampisehoana ambony noho ny chiller
1. Paompy roa ary tsy misy Spray Nozzles
Fandaminana havia-afovoany havanana: absorber-evaporator-absorber;
Ireo mpitroka miaraka amina takelaka mitete fa tsy voantsifotra;
Sorohy ny fihenan'ny fahafaha-mangatsiaka;
Halaviro ny androm-piainan'ny chiller.
2. Fitsinjarana ny vata fampangatsiahana amin'ny alàlan'ny takelaka mitete ao amin'ny evaporator
Fampiasana mahomby ny faritra famindrana hafanana;
Ahena ny hatevin'ny sarimihetsika;
Hatsarao ny fahombiazan'ny asa;
Ahenao ny fanjifana herinaratra paompy vata fampangatsiahana.
3. Fantsona avo lenta ary fandaminana fivoarana havaozina ao amin'ny evaporator
Hamarino fa na dia ny fizarana ny hafan'ny famindrana hafanana aza;
Ampitomboy ny fahombiazan'ny famindrana hafanana.
4. Hafanana famindrana hafanana
Ataovy azo antoka ny fandidiana azo antoka sy ny fanitarana ny tsingerin'ny fiainana;
Fahombiazan'ny famindrana hafanana avo kokoa amin'ny 93,5%.
5. Teknolojia fanoherana ny hatsiaka
Voaro amin'ny hatsiaka ny fantsona evaporator. Tanteraka izany amin'ny alàlan'ny fanangonana ny rano mangatsiaka avy amin'ny condenser ao amin'ny efi-tranon'ny evaporator, ary avy eo nopotsehina tamin'ny takelaka mitete. Amin'izay dia hajanona eo no ho eo ny fizotran'ny vata fampangatsiahana raha maty ny paompy vata fampangatsiahana.
6. Fandehanan'ny vahaolana
Afaka amin'ny kristaly ary mampihena ny harafesina;
Manatsara ny fahamendrehana ary mahatsapa fanaraha-maso mazava ny chiller.
7. Rafitra fanadiovana entona tsy azo ovaina
Ny fidiran'ny rivotra amin'ny fitaovana fanadiovana dia namboarina tao anatin'ny singa mba hiantohana ny fahombiazan'ny rivotra avo lenta.
8. Rafitra famoahana fiara tsy mandeha amin'ny laoniny
Fehezo ny fanombohana sy ny famonoana ny valizy solenoid izay ampandehanan'ny tsindry avo sy ny fanamafisana ny tsindry ataon'ny varingarina fanadiovan-tena, noho izany dia tanteraka ny fanombohana / fijanonan'ny paompy ary ny famoahana entona.
Ny rafitra fanaraha-maso lavitra an'ny SL dia miorina amin'ny lozisialy Shuangliang ao anatiny, ary afaka mitsidika mora foana amin'ny alàlan'ny tranokala ny mpampiasa miaraka amin'ny kaonty sy teny miafina voasoratra anarana hijerena ny fampahalalana momba ny chiller.
Function: fanangonana tahiry, fanaraha-maso an-tserasera, fitehirizana sy fitantanana angona, famakafakana angon-drakitra ary fanandramana ataon'ny manam-pahaizana, fampitandremana mialoha ny lesoka ary fampandrenesana fanairana.
Ireo teknolojia manana patanty sy mandroso rehetra ireo dia mahatonga ny fandidiana hahomby kokoa, azo antoka ary mora kokoa.
Teo aloha: fitsitsiana rano & fampihenana ny rafi-pitetezana maina
Manaraka: Electric Chiller sy Heat Pump Technology
Lithium Bromide mpitroka chiller
Paompy hafanana mitroka Lithium Bromide
Rijan-drivotra mamonjy rano
Electric Chiller sy Heat Pump Technology
Rafitra famindrana hafanana mahomby
Adiresy: TSIA. 88 XILI ROAD, LIGANG, JIANGYIN, JIANGSU, CHINA
Telefaona: + 86-510-86638822
Shuangliang dia nandresy ny fako TUAS IWMF ...
Fanaterana SHELL & TUBE mahomby ...
Fiaraha-miasa lalina eo amin'i Shuangliang sy ...
Loka natokana ho an'ny angovo
Orinasa tsy miankina 500 malaza